Inkungu ebunjiwe isongele amadolobha amaningi asePunjab naseKhyber Pakhtunkhwa ebusuku phakathi koMsombuluko nangoLwesibili, impilo ekhubazekile kanye nokuphazamisa ukusebenza kwezitimela nokuhamba komgwaqo, kusho abezindaba zeDunya News.
Inkungu ebunjiwe ibe nomthelela omubi ukuhamba kwezimoto zomgwaqo emadolobheni amaningana ePunjab neKP. Ngokusho kokhulumela abakwaMotway, isigaba seMotway sisuka eSwabi saya eBurhan (M1) eKhyber Pakhtunkhwa, isigaba seMoterway sisuka eKhanewal sisiya eMultan (M3), indawo kaMoterway isuka eMultan to Sukkur (M5) njengoba kuvulwe ukubonakala kwayo.
Amaphoyisa akwaMotway aselule abashayeli ukuthi bashintshe amalambu enkungu ngenkathi behamba ngejubane elincane kakhulu njengoba ukubonwa kwehliselwe kuma-zero metres ngenxa yenkungu eminyene. Amaphoyisa akwaMotway athe acele abantu ukuthi bahlale emakhaya bagweme ukuhamba okungadingekile.
Inkungu eminyene iphinde yaphazamisa uhlelo lojantshi njengoba ukuhamba kwezitimela eziningana, okubalwa iKarakoram Express, iKarachi Express ne-Akbar Express, kubambezelekile.
Inkungu emnyama iphazamisa ukuhamba kwezitimela nokuhamba komgwaqo ePunjab KP